Alakamisy Info. About. What's This?
Ny Alarobia dia andro fahatelo ao aminny herinandro raha ny Alatsinainy no andro voalohany, fa andro fahefatra kosa raha ny Alahady no andro voalohany. Aminny Malagasy mandala ny fomban-drazana dia andro fahafito izy raha manomboka aminny Alakamisy ny herinandro. Ny teny malagasy hoe Alarobia na Larobia dia avy aminny teny arabo hoe الأربعاء / al-’arbi‘ā’ izay midika hoe "andro fahefatra".
Ny Alahady dia andro fahafito ao aminny herinandro raha ny Alatsinainy no atao andro voalohany fa andro voalohany kosa izy raha ny Alatsinainy no atao andro faharoa. Andro fahefatra izy ho anny herinandro manomboka aminny Alakamisy. Ny teny malagasy hoe Alahady na Lahady dia avy aminny teny arabo hoe الأحد / al-aḥad izay midika hoe "andro voalohany".
Ny Talata dia andro faharoa ao aminny herinandro raha ny Alatsinainy no andro voalohany, fa andro fahatelo kosa raha ny Alahady ny andro voalohany. Aminny Malagasy manaja ny nentin-drazana dia andro fahenina izy raha manomboka aminny Alakamisy ny herinandro. Ny teny malagasy hoe Talata na Atalata dia avy aminny teny arabo hoe الثلاثاء / ath-thulathā’.
Ny Zoma dia andro fahadimy ao aminny herinandro raha ny Alatsinainy no andro voalohany, fa andro fahenina kosa raha ny Alahady no andro voalohany. Aminny Malagasy mandala ny fomban-drazana dia andro faharoa ny Zoma raha andro voalohany ao aminny herinandro ny Alakamisy. Ny teny malagasy hoe Zoma na Azoma na Joma dia avy aminny teny arabo hoe الجمعة / al-jum‘ah izay midika hoe "andro fahenina".
Ny Herinandro Masina na Herinandro Mangina aminny Kristiana, dia ny herinandro mialoha ny Paska sady ampahany farany aminny fari-potoanny Karemy. Ahatsiarovana ny Fiaretani Kristy fijaliana ny Herinandro Masina. Ny telo andronny Paska aminny Fiaretani Kristy sy ny Fitsanganani Kristy taminny maty dia manomboka aminny Alakamisy hariva aminio herinandro io ka mifarana aminny harivanny Alahadinny Paska. Ireo telo andro ireo no tamponny taona litorjika satria taminny alalanny fahafatesana no nandreseni Kristy ny fahafatesana ary ny taminny fitsanganany ho velona no namerenany indray ny fiainan ...
Ny DistrikanAnjozorobe dia distrika eto Madagasikara, ao aminny tapany avaratra adrefanny FaritaninAntananarivo, ao aminny Faritra Analamanga. manana velarantany 3 714 km 2 ho anny mponina miisa 202 771.
Ny Alakamisy dia andro fahefatra ao aminny herinandro raha ny Alatsinainy no andro voalohany fa andro fahadimy kosa raha ny Alahady no andro voalohany. Andro voalohany ny Alakamisy ho anny Malagasy mandala ny nentin-drazana tsy mandray ny Alatsinainy na ny Alahady ho andro voalohany aminny herinandro. Ny Malagasy talohanny fidiranny kolontsaina arabo sy ny kolontsaina tandrefana dia nisy nanao ny Alakamisy ho andro voalohany aminny herinandro.
Ny teny malagasy hoe Alakamisy na Lakamisy na Kamisy dia avy aminny teny arabo hoe الخميس / al-khamīs izay midika hoe "andro fahadimy".